Sokajy: Ny fahavalo
Hoy i Satana tamin'i Kristy:
"Izao rehetra izao dia homeko Anao, raha hiankohoka eto anatrehako Ianao".
Noroahin'i Kristy anefa izy ka nataony hoe:
"Mandehana ianao ry Satana!"
Hoy kosa indray ilay iray nitady fahefana tamin'i Satana:
"i Madagasikara fotsiny ihany omena ahy mandritra ny 5 taona dia hanompo anao mandrakizay aho hatrany amin'ny afobe; ary omeko anao ny fiainako iray manontolo"
22/08: Fiangonan'i Jesosy Kristy
Sokajy: Ny fiangonana
Ny anarana an-tanimboanjo hoy ny fitenenana. Midika izany fa mety misy ireo manana anarana mitovy na dia samihafa tanteraka aza ny tompony. Mitovy ihany ary ve ny Fiangonan'i Jesosy Kristy sy ny FJKM?
01/03: Na inona na inona
Ny teny hoe na "inona na inona" dia tsy midika hoe "ny sasantsasany" ihany akory fa ... "na inona na inona". Tsy iadian-kevitra izany.
28/02: TSY MISY
Tsy iadian-kevitra ny dikan'ny teny hoe "tsy misy". Ny "tsy misy" dia foana, izany hoe tsy ahitana na dia iray aza. Ny "tsy misy" araka izany dia tsy midika hoe "vitsivitsy" na "arakaraka"; ny "tsy misy" dia "tsy misy", ... aotra.